The Gardener: နက်(က)တိုင်စည်းခြင်း အနုပညာ
ဆရာမြသန်းတင့် ကို သတိရလို့ အနုပညာဆိုတာကို သုံးလိုက်တာပါ။ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ခန်းဆောင်နီအိမ်မက် စာအုပ်တွေတွေ့တော့ ဘာတွေးမိသလဲဆိုရင် ဘာသာပြန်ဖို့အသာထား ...။ ကူးရေးဖို့တောင် စိတ်မကူးချင်ဘူးလို့ ....။ ဆရာဇော်ဂျီကိုယ်တိုင်ကတောင် ဆရာမြသန်းတင့်တို့က professional စာရေးဆရာလို့ပြောပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူတော့ ပြောက်ကြားစာရေးဆရာ လို့ပြောပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေနဲ့ မလုပ်ဘဲ ကြိုကြားကြိုကြားရေးတာကို ပြောတာပါ။ ဒါက အနုပညာကိုရှင်းတာပါ ....။ ရေးမှာကတော့ သိပ်အနုပညာတွေမဟုတ်ပါဘူး ....။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟိုက်ဒရိုဂျင် စာစုများဆိုတဲ့ မထုတ်ဝေရသေးတဲ့ စာအုပ်မှာ မရေးရသေးတဲ့ article တစ်ခုပါ ....။
Necktie သို့မဟုတ် tie ကို အရင်က စာဟောဆရာတွေ လည်ပင်းအေးမှာစိုးလို့စည်းတယ်လို့ ဒန်ဘရောင်းလေးပြောတာကို တစ်ခါလည်းရေးပြီးပါပြီ။ လည်ပင်းလေးနွေးနေအောင်လို့ စဉ်းစားပြီးသုံးစွဲခဲ့ပုံရပါတယ်။ နောက်တော့လည်း အခုလို အလှအပ ပစ္စည်းအနေနဲ့ silk တွေ polyester နဲ့ လုပ်လာကြပါတယ်။ wiki မှာတော့ နှစ်သုံးဆယ် စစ်ပွဲ မှာ ခိုရေးရှန်း စစ်သားတွေ စည်းခဲ့တဲ့ လည်စီးကနေစလာတာလို့လည်းဖြစ်မှာပါ။ တစ်ချိန်မှာ ပုံတောင် ပုံညာက ပရိုင်းမိတ်မှာ လည်ပင်းမှာ အ၀တ်စုတ်တစ်ခုစည်းထားတာများတွေ့လိုက်ရင် Necktie အစ မြန်မာက ဆိုတဲ့ စာသားပြူးပြူးကြီး နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာမှာပါလာဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
မနေ့က အလုပ်အသစ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Necktie လိုတယ်ဆိုလို့ ရှိတဲ့ Tie ကသေးနေလို့ နည်းနည်းကြီးတာသွားရှာပါတယ်။ Mark And Spencer နဲ့ G2000 မှာ ကြည့်ပါတယ်။ အဆင်မပြေပါဘူး။ တွဲရောင်းတာတွေကိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး။ မေးရင် မဖြေချင်သလို လုပ်တာကိုလည်း မ၀ယ်ချင်ပါဘူး။ ရောင်းတဲ့သူက လူငယ်မဟုတ်လို့ သည်းခံလိုက်ပေမယ့် ... ဒါဟာ ဈေးသည်ကောင်းမဆန်ဘူးလို့တွေးမိပါတယ်။ နောက်တော့မှ City Mall က Mark And Spencer မှာမှ အဆင်ပြေတာတွေ့ပါတယ်။ Necktie ဈေးတွေကတော့ သုံးဆယ်ကနေ ၁၄၈ အထိတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ Necktie တစ်ခုရှာရတာ .. ဆဟားရား (မူကွဲ ဆာဟာရ) မှာ ... ရှေ့ကလူ အပေါ့သွားခဲ့တဲ့ အကွက်ကလေးကို လိုက်ရှာရသလောက်ခက်ပါတယ် ...။
Tie နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။
ဟာသလေးတွေလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ငယ်ကတည်းက စာသာ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မတော်ခဲ့ပေမယ့် ဟာသစာအုပ်တွေကိုတော့ ကျေကျေညက်ညက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Reader's Digest မှာဆိုလည်း ဟာသပဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မယောကျာ်းက လူကြီးလူကောင်းပါ ...။ မိန်းမကို နက်ကတိုင် မချွတ်ဘဲ တစ်ခါမှ မရိုက်ဖူးဘူးတဲ့။ ....
အဲဒီဟာသကို သဘောကျပါတယ်။ နက်ကတိုင်စည်းထားတဲ့သူတွေတွေ့ရင် လူကြီးလူကောင်းတွေပဲ ...လို့ စပါတယ်။ ...ကိုယ်ပြောချင်တဲ့လူကြီးလူကောင်းက ဟာသထဲက လူကြီးလူကောင်းတွေပါ ...။
နောက်တစ်ခုက ရဲမှတ်ချက်တစ်ခုပါ ....။
အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ... သေဆုံးသူသည် အသက်ရှူကြပ်ပြီး သေဆုံးသည်ဟုယူဆရ ...။ အနီးအနားတွင် မည်သူ့ကိုယ်မျှမတွေ့ရ။ Necktie ကောင်းစွာမစည်းတတ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်။
နောက်တစ်ခုက ၁၈+ ဟာသဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျာ်းက Boots အကောင်းစားကြီးဝယ်လာပါတယ်။
မိန်းမကို ကြွားချင်လို့ ဖိနပ်ကြီးတကားကားနဲ့ အိမ်ထဲဝင်လာပြီး ဘာထူးခြားသလဲလို့မေးပါတယ်။
အဲဒီတော့ ယောကျာ်းကဒေါပွသွားတယ် ...။
အခန်းထဲသွား အ၀တ်တွေချွတ်ပြီး ဖိနပ်စီးရက်သား တခါထွက်လာတယ် ...။
ဒီလိုဆိုရင်ရော ကိုယ်ဘာထူးခြားသွားသလဲကြည့်စမ်းပါဦး .....လို့ပြောတယ်။
မိန်းမက သေချာကြည့်ပြီး ....
ဘာမှမထူးဘူး ...အရင်လည်း ငိုက်စိုက် ..အခုလည်း ငိုက်စိုက်ပဲတဲ့ .....။
ယောကျာ်းက ဒေါပွသွားတယ် ...။ ဟေ့ ...အဲဒါ boots အသစ်ကို ငုံ့ကြည့်နေတာကွ ...။ boots အသစ်ကို ငုံ့ကြည့်နေတာ ....။
..မိန်းမက ဒေါပွပြီး အော်ပြောလိုက်တယ် ...။
အမှန်က ရှင် Necktie ၀ယ်သင့်တယ် ...။ Necktie ၀ယ်သင့်တယ် ....တဲ့။
... အဲဒီဟာသကိုဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ ...။ ဒါကို သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော် tie ၀ယ်တော့ မော့ကြည့်ချင်လို့လားလို့ပြောပါတယ် ...။ မဟုတ်ပါဘူး .. ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပါ ....။ ၀ိနည်းလွတ်အောင်ရေးထားပါတယ်ဆိုမှ ဘာမှငိုက်စိုက်လဲလို့ လာမေးတဲ့သူများရှိရင် ... မလေးကိုသွားပါ ...။ Twins Tower ထိပ်ကိုတက်ပြီး အပေါ်ဆုံးက ခုန်ချလိုက်ပါနော် ....။
Necktie စည်းရတာ ရည်းစားထားရတာနဲ့တူတယ်လို့ ဆရာတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ချစ်လို့ အနားမှာရှိစေချင်တာ ...ကြာတော့ လည်ပင်းအစ်တယ်ကွာတဲ့ ....။ ... ကြည့်ရတာ သူ့ရည်စားက ဂျူဒိုသမားဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...။
အမျိုးသားတွေကို အတွင်းခံဝတ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူသတ်မှတ်ခဲ့သလဲ မသိကြသေးသလိုပဲ နက်(က)တိုင်ကို formal attire ထဲဘယ်သူထည့်သွားသလဲဆိုတာ ဘဲဥ အစကို မျက်မမြင်ရှာနေသလိုဖြစ်နေတုန်းပါပဲ ....။ ကြီးမြတ်တဲ့ ဗျစ်တသျှတွေကတော့ နက်(က)တိုင်မပါဘဲ ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားလာတာဟာ ... zip မဖွင့်ပဲ အပေါ့သွားသလိုပဲ မဖွယ်မရာ အပြုအမူလို့ယူဆကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မဖွယ်မရာဆိုတဲ့စကားကိုကြားရင် divinity (ခ) moonsoon (ခ) ongoing (ခ) ... ကို သတိရပါတယ်။ သူပြောတာကတော့ ဟင်းတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာချက်မထားတာကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာချက်မထားဘူးလို့သုံးတာနဲ့ မဖွယ်မရာချက်ထားတယ်လို့သုံးတာနဲ့ ဘာကွာလည်းဆိုတာပါ ...။ အနီးအနားမှာ ပညာယှိတွေများလွန်းလို့ တစ်ခါတစ်လေလည်း မျက်နှာငယ်ပါတယ်။ ဟိုတစ်လောကလည်း ရင်ဖုံးအင်္ကျီပြဿနာကို ရဲရဲနီက တင်ပြပါတယ်။ ရင်ဖုံးအင်္ကျီလို့ခေါ်ရင် ထမီကိုလည်း တင်ဖုံးထမီလို့ခေါ်မှ မြန်မာဆန်မယ်ဆိုလို့ ... ဒီပြဿနာတွေ လွယ်လွယ်နဲ့အေးပါ့မလားစိတ်ပူနေမိပါတယ်။
လူဆိုတာ ဦးနှောက်နဲ့တန်တဲ့စာကိုဖတ်ရတယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ကပြောဖူးပါတယ်။ ငယ်တုန်းက အဲဒီသမိုင်းပညာရှင်ကို သူ့မိဘတွေက ဦးခေါင်းခဏာ လက္ခဏာတို့ ခြေခဏာတို့ လိုပဲ သူကတော့ ဦးခေါင်းကို ကိုင်ကြည့်ပြီးဟောတာ ....။ အဲဒီလူက သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်လာမယ့်လူငယ်လေးကို ပြောတယ်....။ သားလေး ခေါင်းက သိပ်ကောင်းတဲ့ ခေါင်းအမျိုးအစား ...ဘာတွေဖတ်လဲ ပြောပြပါဦးဆိုတော့ ...ကလေးလေးက သူဖတ်တာတွေကိုပြောပြတယ် ....။ အဲဒီတော့ သမိုင်းလို နိုင်ငံရေးအမြင်လို စာမျိုးကို ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ် ...။ အဲဒီကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘာစွဲသွားသလဲဆိုတော့ ...ငါ့ခေါင်းက အင်မတန်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆိုတဲ့ အသိပဲ ....။ သူလည်း သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်လာပါတယ် ...။ပြောချင်တာက ကိုယ်နဲ့ ဆန့်သလောက်ဖတ်ဖို့ပါ ....။ ကျွန်တော်ဆို တန်ရာတန်ရာပဲဖတ်တယ် ...။ဥပမာ ဟာသတို့ဘာတို့ ...။ ရုပ်ရှင်ဆို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေနားမလည်ဘူး ....။ ကာတွန်းကားလောက်ပဲကြည့်တယ်။ နားမလည်တာတွေမကြည့်ဘူး ...။ ဥပမာဆိုပါတော့ ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ခန်းပေါ့ ...သာမန်နမ်းတာလောက်ဆိုရင် နားလည်သေးတယ်။ ဥပမာ ရဲ့ ဥပမာ lip kiss ဆိုပါတော့ အရင်ကတော့ ဆားမရှိရင် ငန်အောင် တစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းကို တစ်ယောက်စုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ဆားတွေ ပြားငါးဆယ်ဆို အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ရနေတာပဲမဟုတ်လား .....။ ဘာလို့လဲ ....။ နားမလည်တော့ပြန်ဘူး။ (နောက်မှ ဒီကိစ္စကို အကျယ်တ၀င့် ရေးတော့မယ် ....။)
သဘောကျတဲ့ဟာသလေးပြောချင်တယ် ...။ နပိုလီယန်ပြောတယ်လို့ပြောတာပဲ ... ဖွဲ့စည်းပုံရေးတဲ့သူတွေကို အကြံပေးစကားအမှာစကားပြောကြားတာပါ ....။
တိုတိုနဲ့ မရှင်းအောင်ရေး ...။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အမှာစကား ၂၀၁၀ အထိကို အသုံးဝင်တယ် ...။
ဆိုတဲ့ ဘီစီ ၄ရာစုက ဆီနက်ကာဆိုတဲ့ပညာရှင်ပြောတဲ့စကားပါပဲ ...။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်း ချောက်ထဲကျသွားရင်တောင် အခုလောက်ဆို အပေါ်ပြန်တက်ပြီးလောက်ပြီလို့တွေးမိလို့ ...။ ကျွန်တော့်နှယ် .... ကျေးဇူးမသိတတ်လိုက်လေခြင်းနော်။
နောက်ထပ်ဟာသတစ်ခုပါ ...။တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်.... so-called friend တွေကိုပြောတာပါ။
သူငယ်ချင်းကောင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေဟာ အရိပ်လိုပဲ ...မိုးရွာပြီဆို သူပျောက်သွားပြီ .....။ နေသာနေပြီဆို အနားကကို မခွာတော့ဘူး တဲ့ ....။
တော်တော်လေးသဘောကျလို့ပြုံးမိပါတယ် ...။ မိုးရွာတဲ့အခါတွေမှာ ချေးငှားဖို့ သူငယ်ချင်းတွေရှိနေလို့ ... By the way, my dear friends .. I am broke now ... :P
အစားထိုးလို့မရတာ မုဆိုးမ ပဲရှိတယ် တဲ့ ....။
ယောကျာ်းတွေအတွက်ရေးထားတဲ့ထဲမှာ အမှန်ဆုံးစကားပဲ ...။ ကျန်တာတွေ အစားထိုးလို့ရတယ် ....။ မုဆိုးမကိုတော့ အစားထိုးလို့မရဘူး ... မိန်းမက မုဆိုးမ ဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ ကိုယ်လည်းသေပြီ ...အစားထိုးလို့ကိုမရဘူး ....။
အဲဒီဟာသတွေကို ဖတ်တော့ သိပ်မရယ်နိုင်ဘူး ..စည်းထားတဲ့ Necktie ကကြပ်နေလို့ ပြုံးရုံလေးပြုံးရတယ် ..။ မျက်စောင်းထိုးနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ colleague တွေကလည်း သူတို့ကို ခဏခဏပြုံးပြတယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြန်ပြုံးပြတယ် .....။ ရုံးအသစ်မှာ ဟာသတွေဖတ်ရင်း လည်ပင်းအစ်နေရတယ် ....။
နောက်ထပ်ဟာသတစ်ခုကိုတော့ တော်တော်လေး ကြိုက်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ဘာအတွက်မှ အကျိုးမရှိဘူးလို့မပြောပါနဲ့ ...။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ကိုယ့်အမွေစားအမွေခံအတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ် တဲ့။
ဆေးလိပ်သောက်တာကိုတော့ နည်းနည်းမှ အားမပေးပါဘူး။ ဝေးဝေးမှာသောက်ရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့် ရှေ့မှာဆေးလိပ်သောက်ပြီးလျှောက်သွားတဲ့လူရဲ့ နောက်ကလိုက်ရရင် လူဆိုတာ ရန်လိုတဲ့ agressive-type primate ကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ပြေးပဲ ထုနှက်ရိုက်ဖဲ့လိုက်ရမလို ... ဆေးလိပ်သောက်လို့ အသက်တစ်ရက်တိုသွားပြီဆိုပြီး သနားရမလိုလို .. Passive Smoker ဆိုပြီး အလကားနေရင်း ရောဂါရတာကြီးကိုပဲ ကြေကွဲရမလိုလို .... Smoking is Hazardous to health လို့ပဲ မကြားတကြားရွတ်ရမလိုလို ...ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သင့်ယောကျာ်းဘ၀ကို အဆုံးသတ်စေပါသည်လို့ ချဲ့ကားခြိမ်းခြောက်ရမလို ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဟာသတစ်ခုကိုထပ်ဖတ်လိုက်တော့ နေ့လည် သုံးနာရီခွဲတိတိရှိနေပါပြီ ...။
ဖတ်ဖို့လာပေးထားတဲ့ Project အကြောင်းတွေကိုမှတ်ဖို့ ဘောပင်တောင်းတော့ Companyမှာ ဘောပင်အပိုမရှိဘူးဆိုတာသိသွားပါတယ်။ အခုနလာသွားတဲ့ HR Admin မပေးဘူးလားတဲ့ ... မပေးဘူး ..သူ့မှာရော အပိုရှိလို့လားဆိုတော့ ရယ်ပါတယ် ...။ ကြည့်ရတာ တော်တော်လေးဆင်းရဲကြပုံရပါတယ်။ Admin နဲ့ ကိုယ်ကလည်း နီကိုရဲရဲ့ အလွဲများလောက်နီးနီးလွဲကြပါတယ်။ သူက စောစောခေါ်လို့ ကိုယ်က အစောကြီး ကျီးရော၊ အသက်ကြီးတဲ့ ကျီးအိုကြီးတွေ မနိုးခင်အိပ်ရာက ထပြီး သွားပေမယ့် သူ့ခမျာနောက်ကျတော့ တောင်းပန်ပြီး ခဏစောင့်ခိုင်းတဲ့ sms ပို့ပါတယ်။ မနက်စာ ကုလားစာလေးတွေ စားရင် သူပြန်ခေါ်မှထထွက်သွားပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ရုံးက HQ နဲ့ Branch နဲ့ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ သူက HQ ကိုခေါ်တာ ကိုယ်ကလည်း Branch ကို HQ ဆိုပြီးသွားလိုက်ပါတယ်။ သူက လေးထပ်ကိုတက်ဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်း Branch မှာ လေးထပ်ကို တက်ပါတယ်။ ညာကွေ့ဆိုတော့ ညာကွေ့ပါတယ်။ တွေ့လားဆိုတော့ မတွေ့ဘူးဆိုတော့မှ သူရောကိုယ်ရော သဘောပေါက်ပါတယ်။ ရုံးကလွဲနေတာ ဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာလဲ ....။
ဒါနဲ့ပဲ မေးမြန်းပြီး HQ ကိုသွားပါတယ်။ မသိတော့ ကားစီးရပါတယ်။ ကားတစ်မှတ်တိုင်စီးသွားတဲ့နေရာက အမှန်က လမ်းလျှောက်သွားလို့ရပါတယ်။နီးနီးလေးပါ။ အဲဒီနားမှာ စင်ကာပူမှာ မီးပွိုင့်ထားရတဲ့ လမ်းတွေထဲမှာ အကျဉ်းဆုံးလမ်းတွေ့ပါတယ်။ကားတစ်စီးစာကို မီးပွိုင့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီနေရာကိုဖြတ်တော့ HR Admin က အဲဒီအကြောင်းပြောပြပါတယ်။ SMU ရဲ့နောက်နားလေးမှာပါ။ ဘေးနားမှာ Museum ရှိပါတယ်။ အခုရုံးက မြန်မာတွေက Pennisula မှာ ထမင်းစားချိန် ဝေးဝေးလံလံလျှောက်ပြီး အချိန်ခိုးကြတယ်လို့သတင်းပေးပါတယ်။ မိုးရွာတဲ့အခါ ဘီယာလေးဘာလေးသောက်ပြီးမှ ပြန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်းရုံးမှာတွေ့ရတာ တော်တော်လေး ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အခုလည်း တစ်ရပ်ကွက်တည်းသားသူငယ်ချင်းနဲ့ ကျောချင်းကပ်ထိုင်ရသလို နောက်ထပ်သူသူငယ်ချင်းတွေလည်းရပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ အတူလုပ်ရမယ့်အဖွဲ့သားတွေက ကူညီချင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ လူကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်က ပြည်ကြီးက ပေါင်ချိန်အမျိုး အသားမည်းတဲ့ တရုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောကောင်းကြပါတယ်။ ဘာမှမလုပ်နဲ့ဦး ..အေးအေးဆေးဆေးပေါ့လို့ အခါ နှစ်ဆယ်စီလောက်ပြောပါတယ်။
၄ နာရီလောက်မှာ ဟာသလေးတွေဆက်ဖတ်ပါတယ်။ ရုံးမှာက Proxy သုံးလို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အရင်ရုံးက (အရင်ရုံးလို့ အခုပြောရတာကိုက အရသာရှိတယ် ...) ညီလေးကတော့ Phone နဲ့ချိတ်ပြီး Internet Tethering သုံးလို့ပြောပါတယ်။ သုံးနေရင်း Internet က download ရပ်သွားတာနဲ့ဘာနဲ့ တော်တော်လေးကို Inconvenient ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာလို သုံးချင်တာကို Download လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ အဆင်မပြေဘူးလို့ Complain တက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဲဒါ ထုံးစံပဲလို့ပြောပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အားလုံးရှေးရိုးစွဲပုံစံ လုပ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ software တစ်ခု install မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲမေးတော့ ...Install လုပ်တဲ့သူကို ဖုန်းဆက်ထားလိုက်တဲ့ ...။ နောက်တစ်ရက်တိတိစောင့်ပြီး မလာရင် သွားယူကြမယ်တဲ့...။ ကောင်းလိုက်တဲ့ဖြေရှင်းပုံ ....။
နောက်တော့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ငနဲကြီးက ခေါ်ပြီးရှုင်းပြတယ်။ Insurance မှာ နှစ်ခုပဲရှိတယ် ....။Policy နဲ့ Claim ဒါပဲတဲ့ ...။ ရှင်းလိုက်တာ ....။ နောက်တော့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို အကြမ်းဖျင်းပြောတယ်။ Maintainance လုပ်ရမယ်။ Data Patch လုပ်ဖို့လိုရင် လုပ်ရမယ်။ Database ကလည်း ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ DBA ရှိတယ်။ သူ့ကိုQuery ပို့ပေးပြီး run ခိုင်းရုံပဲလို့ပြောပါတယ်။ အင်မတန် အချိန်ကုန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ အသားကျဖို့ စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ပြဿနာလာရင် ဘယ်လောက်အတွင်းရှင်းပေးရမလဲဆိုတော့ အဆင်ပြေသလိုပဲတဲ့။ အဲဒီလို SLA မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ SLA ဆိုတာကတော့ Service Agreement ပါ။ ဘယ်လောက်အတွင်း ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ်တစ်မျိုးပါ။ Customer တွေက အင်မတန် သဘောကောင်းတယ်ဆိုတာကို အခါ ၁၀၀ လောက်ပြောပါတယ်။ သဘောကောင်းတာကို ကျေနပ်ပေမယ့် အဲဒီလူတွေက ကောင်းကောင်းမစစ်နိုင်ဘူးမလားလို့မေးတော့ ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်း သဘောပဲကောင်းပြီး Technical မကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကို သိရပါတယ်။
ဒီရုံးမှာ တစ်နှစ်နဲ့ခြောက်လနေပါမယ် ....။
ပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးလုပ်ကတည်းက Development ပဲလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောလို့ Project Manager က တစ်နှစ်နဲ့ခြောက်လ နေနိုင်မလားလို့မေးပါတယ်။ ဒီမှာက အများဆုံးလုပ်ရရင် Change Request ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အရည်အချင်းသိပ်မတိုးတက်နိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ပိုက်ဆံပိုရအောင်ရွေးရတာ ထင်သလောက်တော့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ....။ ဒါပေမယ့် ဘ၀မှာ ကိုယ်ကြိုက်တာကို လုပ်ရင်း ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေအောင်လည်း စဉ်းစားရပါတယ်။ တက်လမ်းတစ်ခုကို ရွေးတဲ့အခါ ဘယ်ဘက်မှာ နစ်နာသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းတွေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီနှစ်တွေမှာ Project အကြီးတစ်ခု ရထားတဲ့ အရင် company မှာ လုပ်သလောက် အလုပ်က ပညာရစရာမရှိပါဘူး.....။ အဲဒီအတွက် ပြန်ပြီး Cover ဖြစ်အောင် Cert တစ်ခု နှစ်ခု ပြန်ယုဖို့ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်။ .... ဘ၀မှာ ပိုက်ဆံကို ပိုပြီး ဦးစားပေးရမယ့် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံရှာဖို့ကိုရွေးလိုက်ပါတယ် ....။ အရည်အချင်းတိုးတက်တာကို ဒုတိယပို့ထားပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ Struggling လုပ်ရတာတွေက သူလိုကိုယ်လိုပဲဆိုတော့ သိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့နေ့မှာတော့ အဲဒါတွေလည်းဒီကို လာချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အယူအဆကတော့ မမှန်တာတွေက ကိုယ့်ဆီမှာ လမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့ မဟာမြိုင် ဆရာတော် ရဲ့ စကားနဲ့ထပ်တူပါပဲ။ မဟုတ်တာတွေကို ပြောရင် သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါစေ ..လက်မခံပါဘူး ...။ မစဉ်းမစားပို့လိုက်တဲ့ Forward EMAIL တွေကိုလည်း မဟုတ်တာကို မဟုတ်တာကြီးပါလို့ အားလုံးကိုပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။ မကျေနပ်လည်းမတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်သိတာကိုကြီးကို မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလာပြောနေရင် လက်မခံနိုင်ဘူး ....။ လူတွေက ဘာမဆို ကြားရတာကို PROCESS မလုပ်တော့ဘဲ forward လုပ်လိုက်တာဟာ တာဝန်ယူချင်စိတ်မရှိရာရောက်ပါတယ်။ ဒီမေးလ်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်စေသလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သဘာဝမကျတာကို ယုံတတ်တဲ့ ကိုယ့်ဦးနှောက်ကြီး ထုံအ နုံဖျင်းတာကို လူသိခံရာလည်းရောက်ပါတယ်။ နောက်တော့ သည်းမခံနိုင်တာက နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသုံးချတဲ့ အီးမေးလ်တွေပါ ....။ ဒါတွေကို အဲဒီလို ဖြန့်တာဟာ သိပ်ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ကလေးတွေကို ပညာကောင်းကောင်းတတ်စေချင်ပါတယ် ...။ အသုံးချမခံရစေချင်ပါဘူး ...။ သူတို့ ပညာကောင်းကောင်းတတ်လာတဲ့နေ့ကြရင် အကောင်းဆုံးကို သူတို့ရွေးပါလိမ့်မယ် ...။ ကလေးတွေကို အရောင်တွေဆိုးချင်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး ....။ ကလေးတွေဟာ နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘဲ ပညာရေးကို တန်ဖိုးထားသင်ယူနေတာဟာ ဘာမှ မှားယွင်းမနေပါဘူး။ တစ်ချိန်မှာ ပညာရဲ့ အနှစ်သာရကို သူတို့သိလာပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ဝါဒရေးကို သူတို့လေ့လာနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ အမှန်ကို သိဖို့ အမှားကိုလည်း လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ အမှန်တစ်ခုကိုရွေးဖို့ အမှန်တွေ အများကြီးကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ... အမှန်တရားကို တစ်ခုတည်းရှိနေမယ်လို့ပြောတဲ့ နေရာမှာတော့ Necktie မစည်းထားဘဲ အသက်ရှူကြပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ Necktie ကို မလွှဲသာမရှောင်သာတဲ့အခြေအနေမှာ စည်းနှောင်ကြပါတယ်။
Necktie တစ်ခုဟာ formal ဖြစ်သွားစေမယ်လို့ ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ယုံကြည်လိုက်ပါတယ်။
Necktie က ပိုးချည်အတွက် ပိုးကောင်လေးတွေ ချည်မျှင်ထုတ်ခဲ့တာလား လို့စဉ်းစားမနေကြပါဘူး။
ဘာလို့ တံဆိပ်က ဈေးကြီးလာတာလဲဆိုတာကို ထပ်ပြီးတွေးမနေတော့ပါဘူး ....။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ... အဆင်ပြေပြီးသားအမှန်တွေကို ပြဿနာမရှာကြပါဘူး။ ဘာလို့အဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာ အဆင်ဆက်ပြေနေမှာပါလို့ ယုံနေမှန်းလဲမသိပါဘူး။တွေးလည်းမကြည့်ပါဘူး .....။
Necktie လေးတစ်ခုကို စည်းလိုက်ရုံနဲ့ Formal ဖြစ်သွားသလို စိတ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာရော Casual wear နဲ့Formal ဘာနဲ့ခွဲခြားကြသလဲလို့ဆက်တွေးကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ စိတ်မှာလည်း သူ့ Dignity အတွက် ၀တ်ဆင်ရတဲ့ နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုတွေ ရှိပါလိမ့်မယ် ...။ သေချာတာကတော့ ယောနိသောမနသီကာရဟာ Necktie လိုတော့
ဒါတွေအားလုံးအတွက်လိုနေတဲ့အဖြေဟာ အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့ ယောနိသော မနသီကာရလို့ပဲထင်ပါတယ်။
လူတွေနီးနေတာ ဝေးနေတာတွေထက် အချင်းချင်း စိတ်ထဲမှာရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ် ...။
တစ်ယောက်ရဲ့သောကကို တစ်ယောက်က နားလည်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ရှိနေသေးသရွေ့ ...အကွာအဝေးတွေကို စိတ်ထဲမှာ တစ်ဗီဇနာပဲရှိပါလိမ့်မယ် ....။ Fighting ...။ In the long run, we will get what we deserve .... Don't Give Up ...
Don't cry for today, tomorrow and yesterday ... This is life ... notaplayground for us ... :) .... Get up and try to be peaceful for sufferings of life .... I don't want to see tears of sorrow ... Juz wanna see your happy face ...
ရုံးမှာ ထိုင်တွေးလာတာတွေကို မပြုမပြင်ဘဲရေးလိုက်ပါတယ်။
FB မှာ လာနှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။